ကျုံးရေ၊ သံချပ်နဲ့ မန်းသင်္ကြန် | ဧရာဝတီ
ကျုံးရေ၊ သံချပ်နဲ့ မန်းသင်္ကြန်
မန်းသားလေး| April 12, 2012 | Hits:3,823
3 | | မန္တလေး ကျုံးဘေးတွင် စကတ်အတို အင်္ကျီအပြတ်လေးတွေနှင့် ကာလာစုံ မန်းသူလေးများ သူ့ထက်ငါအပြိုင် ရေကစား နေကြသည်။ ဆောင်းဘောက် မျိုးစုံမှ သီချင်းသံမျိုးစုံကလည်း နားကွဲမထွက် ညံနေသည်။ သံစဉ်နှင့် စည်းချက်လိုက်ပြီး မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများ ကိုယ့်မဏ္ဍပ်တွင် လူစည်ရန် လက်ကမ်း ကြော်ငြာများနှင့် ဆွဲဆောင်နေကြသည်။
သင်္ကြန်အကနှင့် မန္တလာသူများ (ဓာတ်ပုံ - မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
မဏ္ဍပ်တွင် ရေပက်ကစားရန် တဦးလျှင် စားစရိတ်ငြိမ်း ငွေကျပ် သုံးသောင်းခွဲ။ ဆယ်ဦးဆိုလျှင် တဦး အခမဲ့ စသည့် ၀န်ဆောင်မှုမျိုးစုံနှင့် မန္တလေးသင်္ကြန်ကို အသက်သွင်းနေကြလေပြီ။ ယခုလိုအချိန်ရောက်ပြီဆိုလျှင် မန္တလေးကျုံးဘေးအနှံ့ မဏ္ဍပ်များတွင် တွေ့မြင်နေကြမြဲ မြင်ကွင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုနှစ် မန္တလေးသင်္ကြန် ပိုမိုထူးခြား၍ နေသည်ဟု ထင်သည်။
ယခုနှစ် မန္တလေးသင်္ကြန်ကို ကောင်းကင်ပေါ်မှ ပုလဲသီးများ ကြဲချသကဲ့သို့ မိုးသီးများက ကြွေကျကာအရင်ဆုံး ကြိုဆိုခဲ့သည်။ လေပြင်းကလည်း မန္တလေးမြို့ကို ခပ်သော့သော့ ဆော့ရမ်းသွားခဲ့သည်။ အနှစ်နှစ်ကာလ အညစ်ကြေးများကို ဤမိုး ဤလေနှင့် ဖယ်ခွာချပေးပြီး မိုးစက်သစ်များနှင့် အားယူကာ နှစ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးနေသည်။ မန္တလေးသင်္ကြန်သည် ယခင်နှစ်များနှင့်မတူ ပိုမိုလန်းဆန်း လတ်ဆတ်နေသည်။
မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ၍ ပျောက်ကွယ်နေသည့် သံချပ်တို့ ပြည်လည်၍ သောသောညံတော့မည်။ ဟစ်ပ်ဟော့ သီချင်းများအစား သံချပ်များ အစားထိုး ၀င်ရောက်လာမည်။ သံချပ်၏ ရသဖြစ်သော အသော့အထေ့လေးများက ပြည်သူများ၏ ခံစားချက်များကို ဖွင့်ဟပေးတော့မည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း သင်္ကြန်အတွင်း သံချပ်ထိုးခွင့်ကို ရက်နီးကပ်မှ ပါမစ်ချပေးလိုက်သည့်အတွက် ကျေးရွာ ရပ်ကွက်ရှိ လူငယ်များ အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မရတော့ဘဲ လူရွှင်တော်အဖွဲ့၊ ကဗျာဆရာအဖွဲ့များမှ စုစည်းကာ သံချပ်အဖွဲ့ကို အမြန်ထူထောင်ပြီး သံချပ်ထိုးကြမည် ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့က လူရွှင်တော်အဖွဲ့ပါ။ ဟိုးအရင် နှစ်တွေတုန်းကတော့ ဒီလိုသံချပ်မျိုး ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ မထွက်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေပဲ ထွက်တာ။ ခုတော့ ပါမစ်ရတဲ့အချိန်က နီးသွားတော့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ မထွက်နိုင်တာကို ကျနော်တို့တွေက ပြန်ဖော်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီလို လုပ်လိုက်တာ။ ခုဆို ကျနော်တို့ကို ဖိတ်တဲ့နေရာတွေ များလွန်းနေပါတယ်” ဟု မန္တလေး လူရွှင်တော်များအဖွဲ့ လူရွှင်တော် နှုတ်ခမ်းမွေး ပါပါလေးက ပြောသည်။
ပါပါလေး၏ ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း သံချပ်၊ ဒဲ့ပြော ဗြောင်ပြော သံချပ်များကို မန္တလေးပရိသတ်အား ဧည့်ခံဖျော်ဖြေရန် သံချပ်တိုက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့သံချပ်မှာ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကျန်းမာရေးတွေကို အဓိကထားပြီး ပြက်ထားတယ်။ သံချပ်ရဲ့ သဘောတရားကိုက လူတွေခံစားနေရတဲ့ လူမှုရေးတွေ၊ စီးပွားရေးတွေကို ဘ၀စုံ ထောင့်စုံယိုင်နဲ့နေတာတွေကို ပြန်တည့်မတ်ဖို့အတွက် ဒီလို သံချပ်လေးတွေနဲ့ တင်ပြကြရတာ။ နှစ်တိုင်း ပထမဆုရတဲ့ သံချပ်ဆရာကြီးတွေ မန္တလေးမှာ ကျန်သေးတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာ သူတို့က လူငယ်တွေကို သင်ပေးလိမ့်မယ်။ သံချပ်တွေက ဒီနှစ် ပါမစ်ရတာ နောက်ကျလို့ ထွက်တဲ့အဖွဲ့ နည်းပေမယ့် နောက်နှစ်တွေဆိုရင် တော်တော်များမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်” ဟု ပါပါလေးက ပြောသည်။
သံချပ်ထိုးမည့် လူရွှင်တော် နှုတ်ခမ်းမွေး ပါပါလေး သံချပ်အဖွဲ့ (ဓာတ်ပုံ - မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် သံချပ်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုသွားမည်ဟု မန္တလေးမြို့တော် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပရေး ဗဟိုဦးစီးကော်မတီမှ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
မန္တလေး စည်ပင်သာယာ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ဌာနမှူး ဦးလတ်မြင့်သိန်းက ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျနော်တို့ ချမှတ်ထားတဲ့ အချက်လေးချက်ကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမဆို ပြက်လို့ရတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သံချပ်ကို အားပေးတယ်။ ငယ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တာ။ ကျနော်တို့ ငယ်တုန်းကတော့ ဗိုလ်သခင်ဆရာအဖွဲ့ဆိုတာ နှစ်တိုင်း ပထမကြီးပဲ ဆုရခဲ့တာ။ သိပ်ကောင်းတာ” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံအစိုးရ ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးမည့် တဖက်သတ် စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများ မပါရန်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေနိုင်သည့် စာသားများ မပါရန်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီသော စာသား၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ တင်ဆက်မှုနှင့် သရုပ်ပြမှုများ မပါရန်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းတခုကို တဖက်သတ် စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ခြင်းများ မပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။
လက်ရှိ မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် သံချပ်အဖွဲ့များ ဖျော်ဖြေရေးအတွက် တရားဝင် တင်ထားသော သံချပ်အဖွဲ့မှာ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ နှစ်ဖွဲ့သာ ရှိသေးသည်။ ပါပါလေးအငြိမ့်အဖွဲ့၏ ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး သင်္ကြန်သံချပ်များအဖွဲ့နှင့် မန္တလေးမြို့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာများ၏ တော်ရိလျော်ရိ သံချပ်အဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။
မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် ယခုနှစ် မဏ္ဍပ်များ များပြားလာသည်။ ကျုံးပတ်လည်တွင် မဏ္ဍပ် ၃၅ ခုရှိပြီး မြို့တွင်းတွင် ၁ ခု၊ တံခွန်တိုင်ဖြတ်လမ်းတွင် ၁ ခု စုစုပေါင်း ၃၇ ခုရှိသည်။ အလှပြယာဉ် ၉ စီးရှိသည်။ နှစ်တိုင်း ထွက်နေကြဖြစ်သော မြို့မအသင်းသည်လည်း သင်္ကြန်သီချင်းများ ကြိုတင်တိုက်လျက်ရှိသည်။
ကျုံးပတ်လည်တွင် မဏ္ဍပ်များရှိသော်လည်း ကန်တော်ကြီး (တက်သေးအင်း) တွင် မဏ္ဍပ်တခုမျှ မရှိပေ။ နှစ်တိုင်း စည်နေကြဖြစ်သော ကန်တော်ကြီးတွင် ယခုနှစ် ရေများ ခန်းခြောက်မှုကြောင့် မဏ္ဍပ်များ မဆောက်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စည်ပင်သာယာဌာန ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ မကြူကြူမော်က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ နှစ်တိုင်း ကန်တော်ကြီးမှာ ရေပက်ခံထွက်တယ်။ မန္တလေးမှာ ရေပက်ခံထွက်စရာတွေဆိုလို့ ကျုံးတွေနဲ့ ကန်တော်ကြီးပဲ ရှိတာ။ ကျုံးမှာ လူတွေများရင် တော်တော်နဲ့ တိုးမရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့က မန္တလေး ကန်တော်ကြီးမှာ အမြဲ ရေပက်ခံထွက်တယ်။ အဲဒီမှာ အဖွဲ့လိုက် ကကြတယ်။ အခုဒီနှစ် ကန်တော်ကြီးမှာ ရေမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မဏ္ဍပ်တွေလည်း မထွက်ဖြစ်ဘူး။ ကန်တော်ကြီး မစည်ကားတော့ဘူး ပေါ့ဗျာ” ဟု မန္တလေး ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
မဏ္ဍပ်များမှာ အသေးစားရေစုပ်စက် သုံးသည့်အတွက် စည်ပင်သာယာ ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာနတွင် ရေစုပ်မော်တော်တလုံးလျှင် ငွေကျပ် ငါးသောင်း သွင်းရသည်။ သင်္ကြန်ရက်အတွင်း ယင်းဌာနမှ ကျုံးပတ်လည်များတွင် လိုက်လံစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင် တင်ထားခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲသည်ကို တွေ့ရှိရပါကလည်း နေရာတွင် ငွေကျပ်ငါးသောင်း ဆောင်ခိုင်းမည် ဖြစ်သည်။ အများသုံးစွဲခွင့်ပြုထားသော ကျုံးရေကို ငွေကျပ် ငါးသောင်း ပေးဆောင်ရသည့်အတွက် ဒေသခံများက မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်သင်္ကြန်တွင် ရေစုပ်စက်အသေးစား သုံးစွဲသူ ၁၃၈ ဦး ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ ကျုံးရေအမှတ်မှာ ၈.၅ အထိ ရှိနေသည်။ မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် ယခင်နှစ်ကကဲ့သို့ လုံခြုံရေး အထူးကြပ်မတ်မှုများ မရှိဟု ဆိုသည်။ ယခုနှစ်တွင် စီစီတီဗီကင်မရာများကို မဏ္ဍပ်များတွင် မတပ်မနေရ ပုံစံမျိုး ဆောင်ရွက်ခိုင်းခြင်းမရှိသေးဟုလည်း သိရသည်။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ပျော်ရွှင်မှုသည် သင်္ကြန်အထိ ကူးစက်လာကြောင်း၊ ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ၍ ခံစားနေရမှုများကို ယခုနှစ်သင်္ကြန်ရေနှင့် ဆေးကြောသန့်စင်ကာ ရှေ့ဆက် အကောင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရမည့်နှစ်အဖြစ် ယုံကြည် အသက်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးဒေသခံများက ပြောဆိုလျက် ရှိကြသည်။
ယခုနှစ် မန်းသင်္ကြန်တွင် ကျုံးရေအပြင်၊ သင်္ကြန်အဆိုအကများအပြင် သံချပ်များဖြင့်ပါ မြူးကြပါတော့မည်။
ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ မူကြမ်း ဘာသာခြား အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားရေးဆွဲထားသလား
နည်းပညာတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က လှည့်စားမှု
အက်ဒမန် ကျွန်းပြန်တို့၏ ခါးသီးနေ့ရက်များ
13 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Ba Gyi April 13, 2012 - 12:09 pm	Citizen of Mandalay must aware the water is very precious especially during summer. I fully support the authority to control water consumption. Money impose on the using water without approval is too small. 50,000 Kyat ? Do you know what is the cost of water nowadays ? Not only authority, you all have the same responsibility to control, minimize waste of your own precious water sources. Don’t be ridiculous. !!!!
Reply	Adminstrator April 13, 2012 - 11:54 pm	ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ သကြန်ပါ။ ရိုးရာ မကိုက်တဲ့ ရှက်စရာ စကတ်အတို ဟိုဟာမြင်ရဒီဟာ မြင်ရ ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဆင်ခြင်ကြဖို့ပြောကြပါဦး။
Reply	winko April 15, 2012 - 3:19 pm	ဟိုဟာမြင်ရအောင် ဒီဟာမြင်ရအောင် ဘာဖြစ်လို့ ပြနေကြတာလဲနော်
ကောင်းတယ်လို့ ယူဆသွားကြရင် ဒုက္ခပါပဲ။
Reply	Maung Maung April 15, 2012 - 8:28 pm	မန္တလေးသင်္ကြန် ပက်လိုက်တဲ့ရေတွေ စီးဆင်းသွားစရာ မြောင်းရှိပါသလားခင်ဗျား။ မိုးလည်းတဖြိုက်နှစ်ဖြိုက် ရွာချလိုက်တာနဲ့ လမ်းမပေါ်ရေတွင်တင်နေတော့တာပဲ။ မိုးရေသန့်သန့် တင်ရေတော့ ကောင်းတာပေါ့။ခုတော့ ရေများလာတာနဲ့ မြောင်းထဲက အပုတ်အသိုးရေနဲ့ မိုးရေနဲ့ လမ်းပေါ်တင်တော့ မိုးရွာပြီးခါစများဆိုရင် မြောင်းပုတ်စော်နံတာများ အောကလိဆန် ရွံ့စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ တတိယမြို့တော်ကြီး ရေနုတ်မြောင်းမကောင်းတာ ရေဆင်းမကောင်းတာ နှစ်ကို ဆယ်နဲ့ချီ ကြာနေပါပြီ ။ မြို့အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့စည်ပင်ကမတတ်နိုင်ရင် ပုဂ္ဂလိကကိုပေးလိုက်
Reply	Maung Maung April 15, 2012 - 8:36 pm	မန္တလာစည်ပင်က မတတ်နိုင်တော့ဘူးလား။ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို ပေးလိုက်ပါလား။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကျသင့်ငွေကို တွကိချက်ပြီးတော့လေ။ ခုတော့ ကိုယ်လည်း ဘာမှမလုပ်တတ်။လုပ်ဖို့လည်းမကြိုးစား။ဒီလောက်ဆိုးရွားနေတာကို မသိကျိုးကျွံလုပ်နေတယ်။ ဘယ်သူအတွက်မှမကောင်းဘူးကွာ နားးလည်လား။အရင်ကလည်းမကောင်းဘူး၊ ခုလည်းမကောင်းဘူး၊နောင်လည်းမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်မချိသော်လည်း ဆဲရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ………သုံးမကျလိုက်တဲ့ကောင်တွေကွာ။ကိုယ့်အမျိုးအဆွေနဲ့နောင်လာနောက်သားတွေ တွေဒုက္ခပဲ။
Reply	Pingback: ဧရာဝတီဝပ်ဆိုဒ်မှ ဆောင်းပါး လင့် ကို ကလိက်လုပ်၍ဖတ်ပါ « danyawadi
zaw April 16, 2012 - 1:57 am	HAPPY NEW YEAR TO ALL OF SHWE
(GOD BLESS AND ALL THE BEST UNITED
STATES OF MYANMAR)
Reply	zaw kind April 16, 2012 - 8:34 pm	မလေးနှစ်ကူးမှာဆိုယင် မလေးမိသားစုလိုက် မလေးဝတ်စုံတူညီလေးတွေကို ၀တ်ပြီး အမျိုးတွေအိမ်လည်ကြတယ်… သိတ်ပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်… မြန်မာ့ သင်္ကြန်ကိုလဲ မြန်မာတွေဟာ အပျော်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းတွေဖြစ်အောင် အားလုံးပညာပေးပြီး ပြုပြင်သင့်ပါတယ်…
Reply	agag April 17, 2012 - 8:29 pm	ဒီမိုကရေစီအော်နေရင်တော့ နဲနဲတော့ ပေါ်မှာပေါ့ဗျာ
Reply	bloodline April 26, 2012 - 6:00 pm	ဒီမိုကရေစီနဲ့ပေါ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီကိုနားမလည်တဲ့သူတွေသာအဲဒီလိုပြောကြတာပါ။
Reply	minnanda April 21, 2012 - 11:10 am	အရှက်မရှိတဲဟာမတွေ ထိုင်းကိုလာခဲ နင်တို့စိတ်ကြိုက် အကြောထလို့ရတယ် မြန်မာပြည်မှာတော လူငယ်တွေကိုမဖျက်ဆီပါနဲ
Reply	Coral April 28, 2012 - 6:02 pm	စကတ်အတိုဝတ်ထားတဲ.သူတွေတိုင်းမန္တလေးသူတွေလို.တော.မထင်လိုက်ပါနဲ. စဉ်းစားကြည်.ပါဦး
ပေါင်တံဖြူဖြူလေးတွေက မန္တလေးသူအစစ် မန္တလေးသွေးအစစ် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကိုလေ
Reply	သိန်းငှက် May 1, 2012 - 3:41 pm	အသားဖြူတွေကို အားမကျပါနဲ့ မန်းလေးသူတိြု့်မန်မာလို နေတာကောင်းပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကဟာတွေက သူများယဉ်ကျေးမှုကို လိုက်ဖျက်ဆီးနေတာ။
“သံချပ်တွေမပါဘဲနဲ့တော့ သင်္ကြန်ဟာ မပြည့်စုံဘူး”
နှစ်သစ်ကူး အမှတ်တရ စကားများ
လွှတ်သဘင် သင်္ကြန် သံချပ် နဲ့ …
ကိုးကြိမ်မြောက် ရခိုင်ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည်
အခပေး ရေကစားမဏ္ဍပ် နည်းပါး၊ ရေပက်ခံကား ဈေးမြင့်
သင်္ကြန်တွင် NLD အလံ၊ တံဆိပ်များ အသုံးမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံ
သင်္ကြန်ကာလ အပန်းဖြေကမ်းခြေ ဟိုတယ်များ ဈေး ၃ ဆကျော်တက်